रावलको प्रश्न- प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको? ओलीको जवाफ- सर्वोच्चमा सोध्न जाऊ
नेपाल लाइभ सोमबार, फागुन २४, २०७७, १५:२३
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भन्ने भीम रावलको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा सोध्न जान सुझाएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद् रावलले सर्वोच्चको फैसलालाई सन्दर्भमा लिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको नाम सोधेका थिए।
'यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) होइन भने अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो? त्यो कुरा पहिले भन्नुपर्‍यो यहाँ, अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि। प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको हो भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनुपर्‍यो यहाँ।'
सोमबार १ सय ११औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले रावलको प्रश्नमा जवाफ फर्काएका हुन्। 'हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी पाऊँ! सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जाऊ, कुन पार्टीको हो', ओलीको जवाफ थियो।
रावललाई आफूले 'तपाईं कुन पार्टीको हो?' भनेर सोध्न नपरोस् भन्दै चेतावनी ओलीले दिए। 'उहाँहरुले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नुभएको थियो। म नेकपाको साधारण सदस्य पनि होइन। अदालतले भन्यो, म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष हो। अदालतले भनेको पनि नसुन्ने', उनले भने।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हामीले भर्खरै समाचार माध्यममा पढ्न पायौं अब निर्वाचन आयोगले गरेको जुन फैसला थियो, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई दर्ता गरिएको जुन थियो, एउटा आश्चर्यजनक कुरा हामीले सुनेका छौं, सर्वोच्च अदालतले अब पार्टी निर्माण गर्ने रे। यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो? हामीले विचार विमर्श गर्नुपर्ने छ।
यो व्यवस्थापिका, यो प्रतिनिधि सभा हामीले यसका कुराहरु तपाईं हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ। त्यसकारण म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यदि होइन भने अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको हो? त्यो कुरा पहिले भन्नुपर्‍यो यहाँ, अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि। प्रधानमन्त्रीले कुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको हो भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनुपर्‍यो यहाँ।
केही मानिसहरु छन्, जो अरुथोक केही देख्दैनन्, अर्जुनले माछोका आँखामात्रै देखेजस्तै पद, सत्ता, स्वार्थ मात्रै देख्छन्। हिजो मैले बोलिनँ, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो भनेर सोधिरहेका थिए। मैले उहाँहरुलाई सोध्न नपरोस्, तपाईं कुन पार्टीको हो? उहाँहरुले मलाई नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि निकाल्नुभएको थियो। म नेकपाको साधारण सदस्य पनि होइन।
अदालतले भन्यो- म कुन पार्टीको सदस्य हो, कुन पार्टीको अध्यक्ष हो। अदालतले भनेको पनि नसुन्ने। देख्दै नसक्ने, देख्नै नखोज्ने आँखा भएर के गर्ने? कान भएर के गर्ने, सुन्नै नसक्ने? त्यो जन्मदैको दोष पनि होइन। कुनै रोग बिमारको दोष पनि होइन। तर, सुनिरहेको छ तर पनि सुन्दैन। देखिरहेको छ, तैपनि देख्दैन। अब हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो जानकारी पाऊँ! सर्वोच्च अदालतमा सोध्न जाऊ, कुन पार्टीको हो।